Soo-saaraha Soo-saaraha Hawada Shiinaha iyo Soo-saare | Xinneng
Qalabka waxaa ku jira unugga iskuxirida, guddiga xakamaynta ugu weyn, guddiga xakamaynta heerkulka ee qolka qabow, guddiga hawlgalka, iwm.
Guddiga xakamaynta heerkulka ee ikhtiyaariga ah iyo guddiga hawlgalka. Guddiga xakamaynta ugu weyn wuxuu bilaabi karaa / joojin karaa kombaresarada illaa.
nidaamka cadaadiskiisu hooseeyo, oo ku habboon dukaamada waaweyn, weelasha caanaha, chiller, iwm, ikhtiyaar ahaan, nidaamku wuxuu xakamayn karaa kombaresarada illaa heerkulka, isaga oo la jaanqaadaya heerkulka, howlaha dib u habeynta.
Faa'iidooyinka Qaboojiyaha Hawada
Nidaamka kontoroolka oo dhan waxaa toos loogu isticmaali karaa qolka qabow iyada oo aan loo baahnayn ilaaliyaal dheeri ah.Waxa uu leeyahay hawlo kala duwan oo ilaalin ah, sida waji haynta, wajiga oo maqan, ka badnaanta, kombaresarada bilawga xad dhaafka ah, heerkulka qiiqa, heerkulka sare / hooseeya ee nidaamka, iwm Iyada oo jaangooyaha xawaaraha marawaxadaha, marawaxadda isku soo uruurisa waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo heerkulka heerkulka. Iyadoo la soo bandhigayo xogta hawlgalka, waxay hubin kartaa socodka socda, heerkulka qiiqa iyo heerkulka isku soo ururaya ee kombaresarada.
Shay ku habboon qaboojiyaha ugu dambeeya sida R410A, CO2, ammonia, glycol iyo kuwa qaboojiyaha kale ee gaarka ah ayaa la heli karaa.
cadaadis, ku habboon dukaammada waaweyn, weelasha caanaha, chiller, iwm, ikhtiyaar ahaan, nidaamku wuxuu xakamayn karaa kombaresarada illaa heerkulka, isagoo la jaanqaadaya heerkulka, kala-soocidda howlaha qaboojinta.
Mabda'a qaboojiyaha ee qaboojiyaha (hawo-qaboojiyaha uumiga) waa: marka marawaxaddu socoto, waxay gashaa godka si ay u dhaliso cadaadis taban, sidaa darteed hawada banaanka ah waxay dhex mareysaa dusha sare ee daahyada iyo huurka si ay ugu qasbaan heerkulka guluubka qalalan ee hawada daaha ah si ay ugu dhawaato hawada banaanka Heerkulka guluubka qoyan, yacni, heerkulka guluubka qallalan ee ka soo baxa hawada qaboojiyaha ayaa 5-12 ° C ka hooseeya heerkulka guluubka qalalan ee dibedda (illaa 15 ° C qalalan iyo meelaha kulul). Hawo kulul, ayaa sii weynaaneysa kala duwanaanta heerkulka, iyo ka sii fiicnaanta saameynta qaboojinta. Sababtoo ah hawada marwalba waxaa lagu soo bandhigayaa gudaha dibedda, (markan waxaa loo yaqaannaa nidaam cadaadis togan), waxay haynta gudaha ku hayn kartaa mid cusub; isla mar ahaantaana, maxaa yeelay mashiinku wuxuu adeegsadaa mabda'a uumiga iyo qaboojinta, wuxuu leeyahay labada shaqadood ee qaboojinta iyo huurka (qoyaan qaraabo ah wuxuu gaari karaa 75% Kaliya ma hagaajin karo xaaladaha qaboojinta iyo qoyaanka, laakiin sidoo kale nadiifiya hawada, yareeyo heerka jeexitaanka irbadda ee habka tolnimada, iyo kor u qaadida tayada alaabada dharka tolida.
Qaboojiyaha hawadu (uumiyaha hawo-qaadaha) wuxuu ku hareeraysan yahay daahan qoyan oo malab ah oo ka samaysan qalab gaar ah, kaas oo leh aag ballaadhan oo si joogto ah u qoyaya daahyada qoyan iyada oo loo marayo nidaamka wareegga biyaha; daah qaboojiyaha hawada ee qoyan wuxuu ku qalabeysan yahay hufnaan sare, buuq hooseeya iyo taageere tamarta badbaadiya. Marka marawaxaddu socoto, cadaadiska taban ee ay soo saartay qaboojiyaha hawadda daahyada qoyan ayaa sababaya in hawada ka baxsan mashiinka ay ku dhex socoto daahyada qoyan ee qoyan ee mashiinka ku jira. Uumiga biyaha ee daaha qoyan wuxuu qaataa kuleylka, taasoo ku qasbeysa hawo soo dhex marta daaha qoyan inay qabowdo. Isla mar ahaantaana, tan iyo markii biyaha ku jira daaha qoyaanka uumi baxayaan hawada maraya daahyada qoyan, taas oo kordhinaysa qoyaanka hawada, qaboojiyaha hawadda daahyada qoyan waxay leedahay labada shaqo ee qaboojinta iyo sii kordhinta qoyaanka.
Astaamaha ugu muhiimsan ee qaboojiyaha hawada
Investment Maalgashiga hoose iyo waxtarka sare (laga yaabee 1/8 keliya isticmaalka tamarta qaboojiyaha dhexe) ② Qaboojiyaha hawada waa la isticmaali karaa iyadoo aan la xirin albaabada iyo daaqadaha. CanWaa beddeli kartaa hawada qulqulaya, hawada kulul iyo urta leh gudaha waxayna ku dhammayn kartaa bannaanka. Consumption Isticmaalka tamarta hoose, isticmaalka korantada saacaddii waa 1.1 digrii saacaddii, Freon la'aan. Volume Muga saadka hawada ee qaboojiye kasta wuxuu kuxiranyahay doorashada: 6000-80000 mitir cubic. Wind Dabeel kasta oo qabow waxay dabooshaa aag dhan 100-130 mitir murabac ah. Qaboojinta qaybta ugu weyn (daah qoyan).
Hore: Taxanaha Generator Volvo
Xiga: Cutubka Nooca Sanduuqa